Mogadishu Journal » 2021 » August » 29
//August 29, 2021
US says drone strike foiled another Kabul airport attack
US military says strike hit vehicle carrying Afghan ISIL affiliate suicide bombers on their way to attack Kabul airport. 30 Aug 2021 The United States has carried out a drone strike against a vehicle of suicide bombers linked to the Afghan ISIL affiliate that intended to target...
(Sawirro) Kooxdii ku guuleysatay Ciyaaraha gobolada Puntland oo Muqdisho soo gaartay
Kooxda gobolka Haylaan ee ku guuleysatay ciyaarihii gobolada Puntland ee dhowaan lagu soo gebagebeeyey Garoowe ayaa galabta soo gaartay Muqdisho. Waxaa garoonka dayuuradaha Aadan cadde ee Magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey masuuliyiin ka tirsan DF oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka...
Maamulka Puntland oo Galmudug ugu deeqay gaadiid dagaal & hub (Daawo Sawirro)
Guddoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur oo shir gudoomiyey shirka Amniga Gobolka Mudug ayaa looga hadlay Iskaashiga Puntland iyo Galmudug. Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa Gaadiid isugu jira 8 gaari oo kuwa dagaalka ah, gaari Ambalaas ah iyo booyad ku wareejiyey dowladda...
(Akhriso) Afar qodob oo looga hadlay kulan ay yeesheen Midowga Musharaxiinta
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Xubnaha Golaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha, kaasoo ay kaga hadlayeen xaaladda dalka gaar ahaan Arrimaha doorashooyinka. Afhayeenka Midowga Musharixiinta Musharax Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in kulankooda ay diirada...
Madaxweyne Guudlaawe oo ku laabtay Jowhar kadib markii uu ku fashilmay tagista Baladweyne (Sawirro)
Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku laabtay Magaalada Jowhar kadib markii uu ku guul dareestay in uu tago magaalada Baladweyne. Madaxweynaha oo socdaalkiisa ay ku wehliyeen Gudoomiyaha Baarlamaanka Mudane Cabdixakiin...
Ciidamadii ugu Dambeeyay ee u dhashay Britain oo isaga baxay Afganistan (Sawirro)
Dowlada Britain ayaa soo gabo gabeesay daadgureynta muwaadiniinteeda ku sugnaa dalka Afganistan gaar ahaan magaalada Kabul ay dhawaan la wareegeen dagaalyahanada kooxda Taalibaan. Ciidamo badan oo ka socday dalka Britian ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Kabul gaar...
Gabdhihii ugu horeeyay oo kamid noqday Haramcad oo tababar loo xiray (Sawirro)
Magaalada Cankiri ee dalka Turkiga waxaa tababar loogu soo xiray dufcadii ugu horaysay ee gabdho dhamaystay tababar ciidan, kuwaas oo ka mid noqonaya Ciidanka Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Taliyaha ciidanka Booliska Soomaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar...